NextMapping | Next Khariidadda ™ Infographics
Marka xigta NextMapping™ Waxaan aaminsanahay cilmi-baarista - waxaan sidoo kale aaminsanahay bixinta cilmi-baarista qaab si fudud loo kala saari karo.
Macluumaadkeenayagu waa 'dashboodhka' mustaqbalka ee mawduucyada shaqada.
Sidee Hogaamiyayaashu u UpSkill iyo ReSkill Shaqaalaha u dabooli karaan Baahida Ganacsi ee Cusub ee Mustaqbalka
Waxaa jirta baahi deg deg ah oo loo qabo shakhsiyaadka, hogaamiyaasha iyo shaqaalaha si loo ogaado cilladaha xaga xirfadaha iyo in la dhiso qorshe 'maxaa xigi doona' sidii loo dhisi lahaa xirfadaha loo baahan yahay in lagu maro caadiga caadiga ah.
6-daan talaabo ee wax looga qabanayo dib ubeynta iyo kor u qaadista ayaa lagu bixiyay boggan.
5 Shaqaalaha Xirfadaha waxay u baahan yihiin inay ku guuleystaan ​​'' kan xiga '' Caadiga ah ee shaqada
Korodhka shaqada fog iyo nooca mustaqbalka ee shaqada (fog / xafiiska) waxaan dhamaanteen u baahanahay inaan sare u qaadno xirfadaheena 'aadanaha'.
Infograafigani wuxuu bixiyaa aragtiyo iyo xirfadaha isbeddelka ee ay u baahan yihiin shaqaaluhu si loogu guuleysto 'shaqada' caadiga ah ee xigta
Cusub & 'Xiga' Caadiga Shaqada
Nolosha musiibada ka dib iyo xaqiiqada shaqada ayaa u ekaan doonta si aad uga duwan sidii ay wax ahaayeen. Diyaar ma u tahay?
Infografigani wuxuu bixiyaa tirakoob iyo qalab labadaba si loo kordhiyo xirfadahaaga si aad ugu sii gudubto shaqadeena 'xigta'.
Sidee loo Badiyaa Waxsoosaarka Iyadoo Meel fog laga shaqeynayo
Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee dadka ka shaqeeya meelaha fog ayaa ah sida ay ugu sii jiri lahaayeen wax soo saar.
Waxaan bixinaa talooyin 8 sida loo hubiyo inaad noqon karto midka ugu wax soo saarka badan maalin kasta.
Macluumaadka noocan ah wuxuu bixiyaa tirakoobyo iyo qalab labadaba sida loo kordhinayo waxtarkaaga u shaqeynayo meel fog.
NextMapping™ Nooca Cusub ee Shaqada
Faafida Coronavirus wuxuu cadeeyay in shaqadu weligeed isku mid noqon doonin.
Dhaqanka goobta shaqada toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa muujisay in shirkadaha CAN ku guuleystaan ​​shaqaalaha fog. Faafida faafinta kadib 'ganacsiga sidii caadiga ahayd' ma noqon doonto 'ganacsi cusub oo caadi ah'.
Tan macnaheedu waa hoggaamiyeyaashu waxay u baahan yihiin inay noqdaan kuwo dagan, naxariis leh oo diyaar u ah inay beddelaan qaab-dhismeedka jira si ay diiradda u saaraan 'dadka marka hore'.
Macluumaadka noocan ah wuxuu bixinayaa tirakoobyo ku saabsan “NextMapping™ Nooca Cusub ee Shaqada. ”
Hal-abuurnimo: Istaraatiijiyad Muhiim ah 2020 & Beyond
94% ka mid ah howl wadeenada la wareystay ayaa sheegay in hal-abuurnimada ay muhiim utahay istaraatiijiyadda 2020 iyo wixii ka dambeeya.
Hal-abuurnimada waxaa ka mid ah hal-abuurka waqtiga-dhabta ah waxayna u baahan tahay dadka iyo isku-duubnida dhaqanka.
Macluumaadkan cusubi waxaad ka ogaataa ROI ee hal-abuurka iyo shirkadaha qaarkood 'ku guulaysanaya' hal abuurnimada.
Maxay Fiidiyowgu u yahay 'Waa Inuu Istaraatiijiyad Samee' Mustaqbalka Shaqada
Adiga iyo shirkadaada ma dalban kartaan fiidiyow si aad u shaqaaleysaan oo aad u sii haysataan kartidaada ugu sareysa?
Daraasad ayaa muujisay in fiidiyaha loo isticmaalo '67% daawadayaasha mobilada' iyo Millennials iyo Gen Z waxay raadiyaan fiidiyowyo si ay wax uga ogaadaan wax badan oo ku saabsan loo shaqeeyaha.
Si aad u hesho wax badan oo ku saabsan sababta fiidiyowgu uu u yahay istaraatiijiyad mustaqbal shaqo soo dejiso macluumaadkan cusub ee koox kooxdeedka NextMapping.
NextKhariidaynta ™ - Kafiloow, Soco oo Abuur Mustaqbalka Shaqada
Cutubyada 1-8 Infographics-ka buugga cusub, NextMapping ™ - Ka-baaraandeg, Dul mari oo Abuur Mustaqbalka Shaqada
Qorista Millennials-ka iyo Gen Z's Goobta Shaqada Diyaar u ah Mustaqbalka
Tartanka kartida ayaa sii wadi doona inuu sii kordho maadaama dadku ay haystaan ​​fursado badan oo ay ku shaqeeyaan marka loo eego sidii hore.
Shirkaduhu waxay hadda la tartamayaan shirkadaha kale ee adduunka si ay u soo jiitaan una hayaan dad karti leh. Si loogu daro culeyska Millennials iyo Gen Z's waxay doorteen inay noqdaan ganacsade.
Sideed uga mid noqon kartaa kooxda ugu horeysa qoritaanka Millennials iyo Gen Z's?
Ka eeg macluumaadkan qaab-xisaabeed leh tirakoobyo iyo aragtiyo ku saabsan qoritaanka mustaqbalka shaqada.
Shaqaaluhu waxay qaataan Isbedelka Dijital ah & AI
Waxay umuuqataa dadka intiisa badan inay ubaahanyihiin isbadal dhijitaal ah oo dheeri ah iyo AI - hubi Infographic si aad waxbadan usii barato.
Hada Soo Degso
Xeeladaha Hoggaaminta ee 8 ee Hogaamiyaasha Keliya
Marka la gaaro 2030 50% kooxaha ayaa ka shaqeyn doona meel fog - haddii shirkaddaadu xilligan leedahay kooxo fog ama haddii kale hoggaamiyeyaashu waxay u baahan yihiin inay yeeshaan istiraatiijiyad gaar ah oo ay ku hawlgalaan shaqaale fog.
Shaqaalaha meelaha fog ka jira waxay doonayaan faa iidooyinka shaqada fog isla markaana waxay rabaan inay dareemaan inay ku jiraan xubno muhiim ah kooxda.
Hogaamiyaasha Xirfadaha Aadanaha 8 waxay ubaahanyihiin jihayn mustaqbalka shaqada
Mustaqbalka shaqadu maaha fikrad, waa mid dhab ah oo ay abuureen go’aamadeenna iyo tallaabooyinkeennu maanta.
Cusbooneysiinta tikniyoolajiyadda ayaa loo baahan yahay si loo kordhiyo xalka dadka waxaanna dhammaanteen u baahanahay inaan noqonno kuwa xariif ku ah farsamada si looga faa'iideysto abuuritaanka mustaqbalka. Si kastaba ha noqotee, tiknoolajiyada kaligeed ma abuurayso mustaqbalkeenna ugu wanaagsan, waa dadka iyo diiradda dadka ugu horreeya ee si buuxda u beddelaya mustaqbalka.
Fiiri infographic ku saabsan xirfadaha aadanaha ee 8 ee ay u baahan yihiin hogaamiyayaashu inay ku wareegaan mustaqbalka shaqada.
Isbeddelka ugu sarreeya ee 10 Hoggaamiye kastaa wuxuu ubaahan yahay inuu sameeyo si uu diyaar u noqdo mustaqbalka
Weligaa miyaad la yaabtay sida dadka qaarkiis ay awood ugu yeeshaan inay fikrad ka helaan oo ay dhaqso ugu fuliyaan?
Caadi ahaan sababta oo ah qofkaas wuxuu soo saaray heerar sare oo ah 'isbeddel hoggaamineed' - awoodda la qabsiga, wax-ka-barashada iyo wax ka qabashada si dhakhso leh.
Fiiri xog-isweydaarsigaan isbeddelada ay u baahan yihiin inay hogaamiyayaashu sameeyaan si ayna u noqon oo keliya mustaqbalka diyaar u yihiin laakiin ay awood u yeeshaan 'abuurida mustaqbalka' si dhakhso leh oo wax ku ool ah.
Xilliyadaha Hoggaanka Sare ee 10 ee 2018
Dhaqamada hogaaminta badankood ee ina keenay halka aan maanta joogno ma noogamareyno halka aan ugu baahan nahay mustaqbal shaqo.
Macluumaadkan macluumaadku wuxuu bixiyaa hagidda hoggaaminta ku habboon ee loogu talagalay 2018.
Sababaha Guusha 13 ee Ururada Diyaar Garowga mustaqbalka
Shirkadaha leh qaab dhismeedyo gaar ah ama istiraatiijiyad hogaamineed ayaa safka hore kaga jira ururada diyaarka u ah mustaqbalka.
Download our 'jaleec' Mustaqbalka Shaqada infographic Taasi waxay bixisaa xogtii ugu dambaysay ee ku saabsan sida mustaqbalka shaqadu u ekaan doonto wuxuuna ku siinayaa madax madax sida aad u qaabeyn karto xeeladahaaga iyo qaababkaada hoggaamiye ahaan iyo shirkaddaada.
Hoggaanka Wadaagga: Qof walba Waa Hoggaamiye
Download our 'eegis' Wadaagga hoggaanka infographic oo bixiya macluumaadkii ugu dambeeyay ee waxa hoggaanka la wadaago fikradda ayaa u ekaan doonta mustaqbalka shaqada.
Horumarinta Hogaamiyaasheena mustaqbalka
Ma ogtahay in maalin kasta oo loogu talagalay 19 sano ee 10,000 Baby Boomers ay gaari doonaan da'da 65 iyo horeyba maanta Millennials waxay ka dhigantaa 50% shaqaalaha adduunka?
Xirfadaha Hogaanka cusub waxaa looga baahan yahay inay la kulmaan waxyaabaha laga filayo Millennium iyo Gen Z's. Soo dejiso this Infographic oo leh macluumaad qiimo leh oo kaa caawin doona inaad fahamto baahidooda si aad si guul leh ugu qorshayso horumarkooda!
Mustaqbalka Urur Shaqo
Mustaqbalka Shaqada ayaa Hada ah iyo Ururadu WAA INUU FURSADUU Mustaqbalka in lagu guuleysto. Soo dejiso macluumaadkan muujinta ah si aad u ogaato halka ay Diiraddaadu tahay… Dhawr ama mustaqbal!
Fiilooyinka 5 ee Aragtiyo Dhowr Ah
Mustaqbalka muhiimka ah ee xirfadda shaqadu waa awoodda wax looga arko dhammaan dhinacyada. Tani waxay ka dhigan tahay in xaaladaha lagu arko muraayadda iskeed / kale / warshadeed / macmiil / caalami - infographic-kaani wuxuu siinayaa aragtiyo ku saabsan sida loo dhiso karti aragti badan oo mustaqbalka shaqada ah.
Shirkadaha Dhiirrigelinta 5 leh Hoggaamiyeyaasha Shaqada ee mustaqbalka
Soo dejiso mustaqbalkan infographic shaqo ee wadaaga tusaalayaasha shirkadaha kala duwan ee 5 iyo sida ay hogaamiyayaashu ugu dhaqmayaan cunsuriyada u diyaargarowga mustaqbalka iyo waxa aan ka baran karno qaabkooda.
Saxiix imminka si aad u soo dejiso warqadda cad
Haddii Robots yihiin mustaqbalka shaqada - Maxaa ku xiga dadka?